စီစဉျ Charleston မှစ. အလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု, တောင်ပေါ်ကသာယာသော, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးတောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 888-702-9646. ပျံစီးပွားဖြစ်လုပ်ရတဲ့အများကြီးကပါဝင်ပတ်သက်. လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူ, လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေး, မကြာခဏနှောင့်အယှက် seatmates, သငျသညျပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီးပင်ပန်းသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့ခညျြနှောငျနေကြတယ်.
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပျံသန်းမှုနည်းပြပျံတစ်ခုပေးနေတာဖြစ်နိုင်အောင်မသက်မသာဖြစ်လာကြပါပြီ. အဆိုပါသတငျးကောငျး, သငျသညျအိပ်နှင့်သင့်ပျံသန်းတစ်လျှောက်လုံးအပန်းဖြေနိုင်အောင်သင်အမြဲပုဂ္ဂလိကပျံသန်းနိုင်သည်. ဒါဟာအစကဖြစ်နိုင်ခြေသင်သည်သင်၏ဧည့်သည်များဖျော်ဖြေသို့မဟုတ်ပင်ရုံမစောင့်နိုင်ကြောင်းကိုအစည်းအဝေးလုပ်ဆောင်သွားရန်စေသည်.
သင်တစ်ဦးအားလပ်ရက်များအတွက် Charleston ရန်သင့်လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်းတစ်ပါတီပစ်နိုင်ပြီးပင်သင်တို့နှင့်အတူအသင့်ကြောင်သို့မဟုတ်ခွေးဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်.
စျေးသက်သာ Empty ခြေထောက်နဲ့လေယာဉ်ပျံငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု Charleston တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားငှားရမ်း
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သာသင်နှစ်သိမ့်အတွက်ပျံသန်းသေချာပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုလည်း privacy ကိုပေးသည်. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေးသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုကိုင်တွယ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, ပုဂ္ဂလိကပျံသန်းကျိန်းသေပိုကောင်းရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
ဒါဟာသော်လည်း privacy ကိုအကြောင်းကိုမဖြောင့်မယ့်, ဒါကြောင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းဖွင့်. အဆိုပါမဟုတ်ဘဲယှဉ်ပြိုင်မှုပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်စျေးကွက်ပေးထား, ငါတို့သည်ငါတို့၏လေယာဉ်ထိပ်တန်းထစ်အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေယာဉ်မှူးစံနမူနာပျံမှတ်တမ်းများရှိသည်သေချာအောင်.
တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံငှားရမ်းမကြာခဏစျေးကြီးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမဲ့, ဒါကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံးလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူလေယာဉ် booking ထက်ပိုကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာဖြစ်ထွက်လှည့်နိုင်ပါတယ်. အချိန်ပိုက်ဆံသည်နှင့်သင်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပေါ်ပါလျှင်, သင့်ရဲ့အချိန်ဇယားကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်နှင့်သင်၏သက်တမ်းအတွင်းပိုပြီးအမှုအရာလုပျနိုငျ 24 နာရီ. တကယ်တော့, လေယာဉ်ငှားရမ်းသင်သည်သင်၏ဦးတည်ရာကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ပိုပြီးအခမဲ့အချိန်ပေးသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကပင်သင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်း Charleston တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားထဲမှာအကောင်းဆုံးဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များကိုခံစားရချင်ပါတယ်.
အနီးဆုံးကိုလံဘီယာမြို့တော် CAE လေဆိပ်ကိုသင်အတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်ကိုလံဘီယာများအတွက်အဓိကစီးပွားဖြစ်လေဆိပ်နှင့် Midlands ဒေသဖြစ်ပါသည် & Charleston ထဲက, တောင်ပေါ်ကသာယာသော, မြောက်အမေရိက Charleston, Beaufort နှင့် Dorchester ကောင်တီ, SC https://www.iflychs.com/
Charleston, တောင်ပေါ်ကသာယာသော, Sullivan ကျွန်း, မြောက်အမေရိက Charleston, မိုက်သောသဘောသည်သဲသောင်ပြင်, Johns ကျွန်း, စွန်ပလွံကျွန်း, Charleston လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, ငန်း Creek အဘိဓါန်, Wadmalaw ကျွန်း, Ravenel, Ladson, ဟောလိဝုဒ်, Summerville က, Huger, Awendaw, Cordesville, အဒမ် Run ကို, Moncks ထောင့်, Edisto ကျွန်း, Ridgeville, Bethera, Jacksonboro, Pinopolis, Cottageville, Bonneau, mc Clellanville, ဂျိမ်းစ်တောင်း, အစိမ်းရောင်ရေကန်, round အို, Dorchester, cross, စိန့်စတီဖင်, Russellville, Walterboro, Harleyville, Grover, Canadys, Pineville, စိန့်ဟယ်လီနာကျွန်း, Lobeco, စိန့်ဂျော့ဂ်ျ, Holly ဟေးလ်, Eutawville, လမ်းကျဉ်း, Seabrook, Beaufort, Lady ကျွန်း, Andrews က, Reevesville, ဆိပ်ကမ်းတော်ဝင်, Yemassee, Ruffin, Sheldon, Vance, Dale, ဂျော့တောင်း, Salters, ဝီလျံ, Smoaks, Bowman, Santee, Islandton, အစောပိုင်းဌာနခွဲ, Greeleyville, Branchville, Summerton, ဟီလ်တန်ဌာနမှူးကျွန်း, Davis ကဘူတာ, Lodge, Manning, Kingstree, Miley, Ridgeland, Elloree, Nesmith, Co. , watchie မဟုတ်, Varnville, Rowesville, Bluffton, Pawleys ကျွန်း, Ehrhardt, Okatie, ကင်မရွန်, Pinewood, Hemingway, Cordova, Bamberg, Orangeburg, Daufuskie ကျွန်း, ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်, Hardeeville, Tybee ကျွန်း, Murrells ဝင်ပေါက်, စိန့် Matthews က, Savannah, မုရတုသဲသောင်ပြင်, ဆွမ်ဆီး